Olana mety hitranga rehefa mamadika ny votoaty - Khachaturyan Nataliya, manadihady momba ny fomba hiatrehana ilay olana ny Semalt Expert
Ny votoaty duplicate dia karazana votoaty hita ao amin'ny tranonkala manerantany amin'ny toerana maro, ary raha toa kosa ireo lahatsoratra mitovy amin'ny tranonkala samihafa dia hidina ny lisitry ny habaka, ary mety hosazian'ny Google izany. Azo antoka ny hiteny fa ny votoaty dika mitovy dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny motera fikarohana . Raha mihoatra ny ampahany iray amin'ny votoaty ao anaty aterineto, Google sy ny fitaovan'ny fikarohana hafa dia tsy hankasitraka izany ary mety hanapa-kevitra ny hanosika ireo toerana ao ambadiky ny fifaninanana.
Fa maninona ny dika mitovy na kopia ny votoatiny?
Khachaturyan Nataliya, Semalt Strategy Content, manazava fa ny dingana lehibe anankiroa amin'ny karoka, duplicate na kopia dia manolotra olana telo lehibe:
Tsy takatr'izy ireo hoe iza no tokony hikorontana ny votoaty ary iza no tokony ho voarara.
Tsy mahafantatra na inona na inona izy ireo amin'ny fitantanana ny metrika amin'ny rohy mankany amin'ny tranonkala iray manokana na mitazona izany amin'ny dikan-teny samihafa.
Tsy azon'ireo fitaovana fitadiavana ny dikan'ny votoatin'ny votoaty ho an'ny valin'ny fanontaniany - wired network home setup.
Ho an'ireo webmasters sy bilaogera, dika mitovy ny votoaty dia mety miteraka olana maro
Manome ny traikefan'ny mpampiasa mahantra izy, ary voatery hanasazy tranonkala maro amin'ny alalan'ny famoahana azy ireo manokana ny mpikaroka.
Mba hanomezana traikefa tsara kokoa, Google dia haneho ny dikan-teny samihafa amin'ny votoatiny iray ihany ary hanilihany ny fahitana ny dika mitovy rehetra
Ny fitovian-jo amin'ny fifandraisana ihany koa dia mety ho voavolavola satria tranonkala hafa no nanoratra ny votoatinao mba hananganana rohy amin'ny tranonkalany manokana. Izany dia mety hamela fiantraikany ratsy eo amin'ny fahitana ny votoatinao amin'ny valin'ny fikarohana momba ny motera
Ahoana no hamahako ny votoaty dika mitovy? ​​
Ny fametrahana ny votoaty dika mitovy na kopia dia azo atao rehefa manitsy ireo olana rehetra ao amin'ny votoatinao ianao ary hijery azy amin'ny Copyscape alohan'ny hamoahana izany amin'ny Internet. Isaky ny mahita kopian'ny votoaty amin'ny tranonkala maro ianao, dia tokony hitatitra any amin'ny Google na hikasika ny administrateur tranonkala mba hamoaka ny votoaty dika mitovy alohan'ny fahatarana, ary manapa-kevitra ny hanasazy ny tranokalanao i Google.
Ny fomba fanodinana 301
Amin'ny tranga sasany, afaka miady amin'ny votoaty dika mitovy ianao amin'ny fametrahana ny alim-pandihizana 301 avy amin'ireo pejy dika mitovy amin'ny votoatinao voalohany. Raha samy mifandray amin'ny URL iray ihany ny pejy samihafa, dia hijanona tsy hifanaraka izy ireo ary tsy hamorona lenta amin'ny ho avy.
Ny fomba fiasa Rel = "kanônika"
Ny safidy iray hafa dia ny anarana rel = = kanonika. Izany dia ahafahan'i Google, Bing ary Yahoo mahalala fa ny pejy web anao dia tokony ho raisina ho marina ary ny pejy hafa mitovy amin'izany dia tokony ho raisina ho toy ny duplicate. Ampahafantaro anay eto fa ny toetoetry ny rel rel = kanônika dia ampahany amin'ny code HTML ao amin'ny tranonkalanao.
Ireo fomba hafa hiatrehana votoaty dika mitovy
Tokony hihazona tsy fitovizana ianao rehefa manamboatra rohy anaty ao amin'ny tranokalanao. Raha sendra misy votoaty, tokony ho azonao antoka fa nampiditra rohy miverin-dahatsary ao amin'ny votoatiny voalohany ny tranonkala syndicating ary tsy misy ny fiovan'ny URL. Mba hahazoana maimaim-poana ny fiarovana ny tranokala sy ny fanangonanao ny votoatinao amin'ny kopia ao amin'ny aterineto, dia azonao atao ny mampiditra ny rohy manokana amin'ny sehatra manokana amin'ny tranonkala rehetra